खोलामा पुल नबन्दा नगरमै ५ मिनेटको बाटो एक घण्टा हिड्नु पर्ने बाध्यता ! - Sagarmatha Online News Portal
खोलामा पुल नबन्दा नगरमै ५ मिनेटको बाटो एक घण्टा हिड्नु पर्ने बाध्यता !
मोरङ । पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–५, मोरङ स्थित बक्राहा खोलामा पुल बनि नसक्दा बर्षामा ५ मिनेटको बाटो १ घण्टा घुमेर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
पथरीशनिश्चरे नगरपालिका तत्कालीन पथरी, शनिश्चरे र हसन्दह गाविस मिलेर बनेको हो । नगरपालिका बनेपछिको ५ नम्बर वडा भएर बग्ने बक्राहा खोलामा बाढी आउदा दुई खाले समस्या आउने गर्दछ । एउटा खोला बाढीले जनधनको क्षति र अर्को खोला तर्ने समस्या । बक्राहा खोला पूर्व उर्लाबारी र पश्चिम पथरीशनिश्चरे नगरपालिका रहेको छ । जस मध्ये ३५० घर खोलापारी वा उर्लाबारी क्षेत्रमा पर्दछ ।
खोला वारी पथरीशनिश्चरे—५ नम्बर वडा पर्दछ । खोलामा बाढी आउँदा वडा कार्यालय हसन्दह बजार, नगरपालिकाको कार्यालय पथरी आएका जनता सो बाटो भएर फिर्न नसक्ने वडा अध्यक्ष जोगबहादुर धिमालले बताए । खोला सानो हुँदा पाँच मिनेटमा घर पुग्ने जनता बाढी आउँदा हसन्दह, पथरी, उर्लाबारी मंगलबारेहुँदै करिव २४ किलो मिटरको दुरी पार गरेर मात्र पुगिने गरेको वडा अध्यक्ष धिमालले बताए ।
नगरपालिकाको ५ नम्बर वडा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटबाट भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष नगरपालिकाले प्रति वडा ८५ लाखको दरले सिलिङ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटले भएको कामको प्रगति विवरण वडा अध्यक्ष जोगबहादुर धिमालले सार्वजनिक गरेको हो । खोलासँगै सुकुम्बासी समस्या पनि गम्भीर रुपमा रहेको वडा अध्यक्ष धिमालले बताए । वडामा ६५ घर ऋषिदेव परिवार पुस्तौदेखि सडककै जग्गामा बस्दै आएका छन् । उनीहरुलाई जग्गा किनेर वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेपनि यो बर्ष सम्भव नभएको अध्यक्ष धिमालले बताए । सुकुम्बासी शीर्षकमा १५ लाख बजेट नगरपालिकाले छुट्याएपनि यो आर्थिक बर्षमा जग्गा किनेर वितरण नभएको उनले बताए । सिलिङ बजेटबाट भौतिक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन र सामाजिक कार्यमा खर्च गरिएको विवरण वडा अध्यक्ष धिमालले प्रस्तुत गरेका थिए ।
Published On: २१ असार २०७६, शनिबार 198पटक हेरिएको